Meya Mutsva weHarare Okurudzira Hurumende Kugadzirisa Nyaya yeMvura
Meya veHarare, VaHerbert Gomba
Zvichitevera kufa kwevanhu nechirwere che ‘cholera’ muguta reHarare, meya mutsva weguta iri, VaHerbert Gomba, vari kukurudzira vachangodomwa segurukota rekurima nemvura, VaPerence Shiri, kuti vashande vose mukugadzirisa dambudziko remvura muguta.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaShiri panyaya iyi.
Asi VaGomba vanotiwo vachagara pasi vachitaurirana nevanotengesa mumigwagwa kuitira kuti muguta mugare makachena.
Vanotivo nhamo yawanda muZimbabwe nokudaro hazvina musoro kuti mapurisa aswere achitandanisa vanotengesa mumigwagwa, asi vanoti kanzura inofanirwa kugara navo pasi vachitaurirana zvinofanira nezvisingafanirwi kuitwa.
“Ini ndiri kuuya nemuvono wakasiyana nezvange zvichiitika. Ini ndiri kuti vanotengesera mumigwagwa havachabatirwi mboma vachirohwa - vanokurukurwa navo,” VaGomba vaudza Studio7.
Meya Gomba vanoti vari muhurukuro nevane zvitoro zvisisiri kushandiswa muguta kuitira kuti varegere vanotengesera mumigwagwa kuti vashandise nzvimbo idzi kuitira kuti vanotengesera mumigwagwa vaite vashoma muguta.
Hurukuro NaVaHerbert Gomba